Obi ụtọ na Dragọn ụgbọ mmiri Ememme-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Obi ụtọ na Dragọn ụgbọ mmiri Ememme
Oge: 2020-08-27 Hits: 23
SUNSOUL ga-amalite ezumike site na June 7th ruo 9th wee laghachi ọrụ na June 10.
Ememe Dragọn nke Boat bu ubochi nke ise na onwa nke ise. Ememme na omenala ndị na-achụpụ ihe ọjọọ ebutewo ọrụ dị iche iche n'ọtụtụ ebe, gụnyere ncheta Qu Yuan, ịghagharị mugwort, ị drinkingụ mmanya realgar, iri zongzi, dragon ụgbọ mmiri dragon, wdg.
Kedu ihe kpatara anyị ji echeta Qu Yuan na Ememme Draat Dọkịta? n'ihi echiche ọma ya nke ịhụ mba n'anya, n'ihi nnukwu mmetụta ịhụnanya ya. Mba na mba choro ndi amaala nwere uche nke oru, lebara ndu ndi mmadu anya, rite uru nke ndi mmadu, ma kwalite mmepe, O kwesiri ibu ntuziaka nke mgbali anyi. '' Tozọ m ga-esi nweta ezigbo ihe ọmụma na ụkpụrụ omume ọma dị nnọọ ukwuu nke na m ga-eji obi m dum chọọ ha site na paradaịs gaa n'ọkụ ala mmụọ. na-achọ ka anyị niile mee otu ihe ahụ, na-agbasi mbọ ike inyocha na ịchụso eziokwu.
Dragọn Boat Festival bụkwa ememme iji lekọta ụmụ agbọghọ. N'ime oge Ming, site na Mee 1 ruo 5, nwa nwanyị lụrụ nwanyị kpọọrọ nwatakịrị ahụ laghachiri n'ezinụlọ ya, ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-asa ofe ihu ha na ofe calamus, ihu wee kpuchie ya ma mee akwa ntutu site na mgbọrọgwụ calamus .
Na Ememme Bogbọ Mmiri Dragọn ahụ, ezinụlọ gbakọtara na tebụl ịkekọrịta zongzi dị ụtọ, otu esi dị jụụ ma kpoo ụbọchị ahụ. Sì ụtọ nke zongzi ga-echetara gị oge ị bụ nwata, na-echeta enweghị nchekasị na obi ụtọ afọ ahụ; mgbe anyị na-echeta oge gara aga, anyị kwesịkwara iji obi ike na obi ike chee ọdịnihu ihu. N'ihi na ụbọchị ọ bụla bụ ụbọchị jupụtara na olileanya.
Na mmechi, SUNSOUL na asi gi ka anyi na eme Drain Boat Festival.
Previous: SUNSOUL na-eche gị na The LATIN TIRE EXPO
Ọzọ: Mmiri ozuzo na June